macOS Monterey na iOS 15 ga - enye gị ohere ịdekọ vidiyo vidiyo site na ndị njikwa dakọtara | Esi m mac
macOS Monterey na iOS 15 ga - enye gị ohere ịdekọ vidiyo vidiyo site na ndị njikwa dakọtara
Dị ka ọ dị na mbụ, na ngosi nke WWDC21 Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ awa abụọ, Tim Cook na ndị otu ya kọwaara anyị isi akwụkwọ akụkọ nke ụdị ọhụrụ nke ngwanrọ maka ngwaọrụ Apple n'afọ a.
Site ugbu a gaa n'ihu, ndị mmepe ga-anwale ụdị beta mbụ nke ngwanrọ a. Ewezuga ikpughere ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ, ha ga-egosikwa anyị akụkọ "zoro ezo" nke egosighi na isi okwu Mọnde. Otu ihe na-adọrọ mmasị gbasara ya video ndekọ mgbe ị na-enwe mmasị na egwuregwu kachasị amasị gị….
Achọpụtala ihe ọhụụ banyere egwuregwu na betas izizi ewepụtara n’izu a. Na nsụgharị beta ndị mbụ nke iOS 15, iPadOS 15 y macOS Monterey Gụnyere bụ ikike ijide ma chekwaa oge 15 gara aga nke egwuregwu oge ọ bụla site na ịpị na ijide bọtịnụ akọwapụtara na njikwa egwuregwu dakọtara nke ị na-egwu.
Kama icheta ịmalite na ịkwụsị ndekọ ihuenyo mgbe ị na-egwu egwu, nhọrọ nhọrọ ọhụrụ a na-enye ndị ọrụ iPhone, iPad na Mac ohere ijide 15 vidiyo nke abụọ nanị site na ịpị na ijide bọtịnụ Share (ma ọ bụ Mepụta) na njikwa egwuregwu dakọtara, dị ka Xbox Series X / S njikwa ma ọ bụ PS5 DualSense.
A obere ihe ọhụụ ga-atọ ndị egwuregwu ahụ ụtọ bụ ndị hụrụ n'anya ịkọrọ oge kachasị egwu ha n'egwuregwu ha. na-enweghị ịhapụ ihe ntanetị nke ha ji egwu egwu ugbu a.
Nke a bụ ihe atụ nke obere akụkọ ndị Apple egosighi na nkwupụta ya na Mọnde gara aga. Ha ga-apụta n’elu izu ole na ole sochirinụ ka ndị mmepe na-anwale ole na ole ndị mbụ betas ma chọpụta ha. Ọ bụghị n'ihi na ha pere mpe, ha ka na-atọ ụtọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac OS X » macOS Monterey » macOS Monterey na iOS 15 ga - enye gị ohere ịdekọ vidiyo vidiyo site na ndị njikwa dakọtara
Sudeikis na-emepe ụzọ maka oge nke anọ nke Ted Lasso
Anyị nwalere Sonos Move onye na-ekwu okwu otu okwu